के यौन सम्बन्धले इम्युनिटी पावर बढाउँछ ? – Nepal Press
के यौन सम्बन्धले इम्युनिटी पावर बढाउँछ ?
२०७८ जेठ १८ गते १५:२३
‘सेक्स गर्नुहोस्, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ । ,’
के तपाईंलाई डाक्टरले यो सल्लाह दिएका छन् । पक्कै दिएका छैनन् । तर एरिजोनाका चिकित्सक फेथ कोट्सले यो सल्लाह दिएका छन् । ती डाक्टरले आफ्नो सल्लाहलाई उनको कक्षमा सीमित गरेनन्, इन्टरनेटमा समेत फैलाए ।
कोट्सले टिकटकमा एउटा भिडियो बनाए । उनले आफ्नो ६ लाख १८ हजार फलोअर्सबीच यो खुलासा गरेका हुन् । उनका एक प्रशंसकले सोधेका थिए, ‘ओर्गास्मले हामीलाई बिरामी हुनबाट बचाउँछ, यो साँचो हो कि गलत?’
जवाफमा, कोट्सले भिडियो साझा गरे। यसमा उनी भन्छन्, ‘सत्य ! कम्तिमा हप्तामा एक वा दुई पटक यौन सम्पर्क राख्दा प्रतिरक्षा प्रणालीले ३० प्रतिशत राम्रो काम गर्दछ । यो डाक्टरहरूको सल्लाह हो ।’
कोट्सले जे भने त्यो भन्ने कुरामात्र पनि होइन । विभिन्न पत्रिकामा यसबारे शोध प्रकाशित भएका छन् । अनुसन्धानमूलक आर्टिकलमा सेक्स वा स्वस्थ यौन सम्बन्धका धेरै फाइदाबारे छन् । कहिलेकाहीँ यसले प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ, कहिलेकाहीँ मुटु राम्रो राख्दछ र कहिले तनाव कम गर्दछ र दिमाग राम्रो बनाउँछ ।
सन् २००४ मा एक अध्ययनले दाबी गर्‍यो कि हप्तामा कम्तिमा दुई पटक सेक्स गरेपछि शरीरमा इम्युनोग्लोबिन ‘ए’ को मात्रा बढ्छ। यो एन्टिबडीको एक प्रकार हो, जसले लार ग्रन्थी, नाक, योनी आदिको म्युकस टिशूबाट प्रतिरोध क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ। यद्यपि, यो अध्ययन २००४ पछि दोहोरिएको छैन। तर त्यहाँ हृदय अनुसन्धान र यौन सम्बन्धबारे धेरै अनुसन्धान गरिएको छ ।
जस्तै २०१८ मा अमेरिकी जर्नल अफ कार्डियोलोजीमा एक शोधपत्र प्रकाशित भएको थियो । यसमा भनिएको छ कि हप्तामा दुई पटक भन्दा बढी सेक्स गर्ने पुरुषहरूलाई महिनामा एक पटक मात्र यौन सम्पर्क राख्नेहरूको तुलनामा हृदयघात हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
जसको हृदयमा केही समस्या छ, उनमा कुनै असर छाड्छ कि छाड्दैन भन्ने प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ । अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनको सुझावअनुसार सेक्स गर्नु उसको लागि सुरक्षित छ जो कुनै चिन्ताबिना तीनदेखि पाँच मेटाबोलिक इक्विवेलेंट (एमइटी) व्यायाम गर्न सक्छ ।
शारीरिक श्रमको बेला जति ऊर्जा खर्च हुन्छ उति नै मेटाबोलिक इक्विवेलेटद्वारा त्यसको मापन हुन्छ । उदाहरणको लागि, एक कम असरवाला एरोबिक व्यायाममा ५ एमइटी ऊर्जा खर्च हुन्छ ।
सन् २०१६मा गरिएको अर्को अनुसन्धानले दाबी गर्‍यो कि नियमित सेक्स गर्ने महिलालाई ह्रदयको समस्या हुने सम्भावना कम हुन्छ । जबकि यस अध्ययनमा एक चेतावनी पनि थियो। अत्यधिक यौन गतिविधिले कहिलेकाहीँ पुरुषहरूमा मुटुको समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। यद्यपि यस तथ्यले केही विगतका अध्ययनहरूको विरोधाभास जनाउँछ । त्यसकारण धेरै व्यक्तिहरूले ‘सुरक्षित’ हुन सल्लाह दिन्छन् कि यदि एक पार्टनरलाई हृदयमा समस्या छ भने डाक्टरसँग परामर्श लिन राम्रो हुन्छ।
अध्ययनअनुसार वयस्क महिलाहरू जो आफ्नो यौन जीवनबाट सन्तुष्ट छन्, उनीहरूमा उच्च रक्तचापको कम समस्या हुन्छ। तर यो पुरुषहरूका लागि राम्रो समाचार थिएन। यसमा अर्को पक्ष पनि छ। उच्च रक्तचाप औषधि सेवन गर्ने धेरै पुरुषहरूमा कम यौन इच्छा देखिएको छ । यसको पछाडि उच्च रक्तचाप र औषधिको प्रभाव पनि हुन सक्छ । त्यसकारण उच्च रक्तचापका बिरामीहरूले डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ ।
त्यहाँ अन्य कुराहरू पनि छन् जहाँ सेक्सको सकारात्मक योगदान छ । २०१९ को अध्ययनले पत्ता लगायो कि पार्टनरसँगको आत्मीयता शरीरमा पाइने कोर्टिसोल हर्मोनको स्तरलाई सामान्य राख्न मद्दत गर्दछ। कार्टिसोल एक स्टेरोइड हर्मोन हो। जब तनाव बढ्छ, रगतमा यसको स्तर छिटो बढ्छ। यौन रिलिज गर्नाले अक्सिटोसिन, शरीरमा एन्डोरफिन जस्ता हार्मोनहरू ‘राम्रो महसुस गर्दछन्’ जुन तनाव कम गर्न वास्तवमै प्रभावकारी हुन्छ।
त्यसकारण, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढोस् वा नबढोस् सेक्सले तनाब कम गर्न अवश्य मद्दत गर्छ ।
प्रोलेक्टिन हार्मोन ओर्गेज्मपछि शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ, जसले सन्तुष्टिको भावना ल्याउँछ। अक्सीटोसिन, एन्डोरफिनहरूले तनाव कम गर्दछन् र राम्रो निद्रामा पुर्‍याउँछन् ।
वैज्ञानिकहरूले सेक्सबारे अर्को अनौठो खोज पनि पत्ता लगाए । उनीहरूले पुरुषहरूको प्रोस्टेट क्यान्सरको सम्बन्धमा यौनको राम्रो गुण पत्ता लगाए । वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि करिब ३० हजार पुरुषहरूबारे अनुसन्धान गरेका छन् ।
नतिजाअनुसार एक महिनामा ६-७ पटक वीर्य स्खलन गर्ने पुरुषको तुलनामा २१ पटक विर्य स्खलन गर्ने पुरुषहरुलाई प्रोस्टेट क्यान्सर हुने सम्भावना कम देखाउँदछ ।
(यो सामग्री नवभारत टाइम्सबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो ।)
प्रकाशित: २०७८ जेठ १८ गते १५:२३